Election Resource Centre Inoti Vanhu Vashoma Zvikuru Ndivo Vanyoresa Kuvhota muNyika
Gumiguru 15, 2020
Ongororo ichangobva mukuitwa nerimwe sangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Centre, ERC, inoratidza kuti huwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota munyika huri kudzikira nekuti hapana dzidziso pamusoro pekukosha kwakaita kuvhota.
Vachiparura muHarare neChina zvakabuda muongorora yavakaita pasurodza dzema By-Election dzese dzakaitwa muna 2019, vanoona nezvekufambiswa kwebasa muERC, VaSolomon Bobosibunu, vati ongororo yavakaita inoratidza kuti huwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota huri kudzikira kana zvichienzaniswa nevanhu vakanyorea kuvhota muna 2018.
Vati kunyoresa kuvhota kunoitwa nguva yese zvisinei kuti kunze sarudzo here kana kuti kwete, asi vanhu havasi kuita izvi.
Vati mumatunhu eMtoko neMarondera makanyoresa vanhu makumi maviri chete, mumatunhu eChegutu neSanyati makanyoresa vanhu gumi chete uye kuGoromomonzi hapana kana munhu mumwe chete akanyoresa kuvhota gore rese.
VaBobosibunu vati izvi zvinoreva kuti komisheni yesarudzo, yeZimbabwe Electoral Commission, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato ezvematongerwo enyika haasi kushanda nemazvo kupa vanhu dzidziso munyaya yesarudzo.
Vati ZEC, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anokurudzira vanhu kuvhota chete panguva yesarudzo. Vati huwandu hwevanhu vanovhota hugona kukwira zvakanyaya kana izvi zvikaitwa nguva yese.
Vatiwo imwe nyaya isina kujeka inyaya yekutarwa kwemiganhu yeConstituency nemaWard ekuvhotera uye zvakakosha kuti izvi zviitwe pajekerere kuitira kuti zvisazokanganisa veruzhinji musarudzo dzinotevera.
Imwe nhengo yeNational Executive yebato guru rinopikisa reMDC Alliance, uye vaimbove munyori anoona nezvesarudzo mubato iri, VaJacob Mafume vaudza Studio7 kuti ZEC inofanira kufambirana nenguva nekushandisa michina yechizvino zvino kuitira kuti vanhu vakwanise kunyoresa vari kudzimba dzavo.
VaMafume ndivo meya weHarare pari zvino. Asi mukuru wekufambiswa kwesarudzo muZEC, VaUtoile Silaigwana, vati pari zvino mutemo wesarudzo unosungira kuti munhu aende kumahofisi avo kuti andonyoresa sezvo munhu achifanira kutorwa mifananidzo nemaFinger Prints.
Vati nekuda kwaizvozvo vanhu havakwanisi kunyoresa kuvhota vari kumba kana kumahofisi avo.
Pasi pemitemo yenyika,kana yaye nguva yesarudzo, ZEC inovhura nzvimbo dzakawanda dzekunyoresa kuvhota muzvikoro nemahofisi ehurumende munzvimbo dzakawanda munyika yese.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZanu PF panyaya iyi.
Asi munyori anoona nezvekufambiswa kwebasa mubazi revechidiki mubato iri, VaMabuto Moyo, vati bato ravo rinogara richikurudzira nhengo dzaro kunyorese kuvhota zvikurusei vechidiki.
Ongororo yeERC inoratidzawo kuti vanhu vekumaruwa vakawanda vanonyoresa kuvhota kudarika vanhu vemumadhorobha.
Vamwe Voyaura Zvichitevera Kupera kweMabasa nePamusana peCovid-19
Kubaiwa kweNhomba Kunopinda Muzuva reShanu muZimbabwe
VaMafunda Vanombosungwa neMapurisa muHarare
Mashoko aVaMnangagwa Kune Vasina Kubayiwa Nhomba yeCovid-19 Oshorwa neVanorwira Kodzero dzeVanhu
Mhemberero dzeBlack History Month dzeGore Rino Dzovhiringidzwa neCovid-19